မေးခွန်း- 2.4G မိုက်ခရိုဖုန်းကို ချိတ်ဆက်ပြီးနောက်တွင် အသံထွက်မလာဘဲ၊ ကွန်ပျူတာအသံသည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
အဖြေ- 2.4 မိုက်ခရိုဖုန်းကို အသံပိတ်ထားသည်၊ အသံတိတ်ကိုထုတ်ရန် "မီနူး" ကိုနှိပ်ပါ၊ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်
မေးခွန်း- USB စက်ပစ္စည်းကို အသိအမှတ်မပြုနိုင်ပါ။
အဖြေ- USB ကြိုးကို ပလပ်မတပ်ထားပါက ချောင်သွားပါက သို့မဟုတ် ပြုတ်ကျပါက ၎င်းကို ထပ်မံချိတ်ဆက်ပါ။USB-HUB ဘုတ်အား ပိတ်ထားပါက သို့မဟုတ် ပျက်စီးပါက၊ ၎င်းကို အစားထိုးပြီး ထပ်မံချိတ်ဆက်ပါ။USB interface ၏ pin များ ပျက်စီးပါက၊ interface board တစ်ခုလုံးကို တိုက်ရိုက် အစားထိုးပါ။
မေးခွန်း- USB ကိရိယာကို အသုံးမပြုနိုင်ပါ။
အဖြေ- 1. USB စက်ပစ္စည်း၏ ဒရိုက်ဘာကို တပ်ဆင်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုပါ၊ ယာဉ်မောင်းကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်း သို့မဟုတ် USB ကိရိယာကို အခြားစမ်းသပ်မှုများနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး အတည်ပြုပါ။မဟုတ်ပါက USB-HUB ကို အစားထိုးပါ။ရန်
2. USB-HUB နှင့် USB စက်များသည် ပုံမှန် သို့မဟုတ် မရရှိနိုင်ကြောင်း အတည်ပြုပြီး စနစ်အား ပြန်လည်ရယူပါ။
မေး- VGA သို့မဟုတ် HDMI အထွက်မှ အသံမရှိပါ။
အဖြေ- ပြင်ပစက်ပစ္စည်းနှင့် ချိတ်ဆက်မှုမှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
မေးခွန်း- ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်သည့်အခါ တုံ့ပြန်မှုမရှိပါ၊ မီးမဖွင့်ပါ၊ စနစ်တစ်ခုလုံးပါဝါမပွင့်ပါ
အဖြေ- 1. ပါဝါအဝင်လိုင်းအား ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိ၊ ပါဝါပိတ်ခလုတ်ကို ဖွင့်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး ပါဝါလိုင်းတွင် ပါဝါရှိကြောင်း သေချာပါစေ။
2. စက်၏ထိပ်ဖုံးကိုဖွင့်ပါ၊ ထိတွေ့ကေဘယ်လ်အား လျော့ရဲရဲချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိစစ်ဆေးပါ၊ နှင့် 5V ပါဝါထောက်ပံ့မှုရှိမရှိကိုကြည့်ရှုရန် touch panel ရှိ "5V, GND" ကိုတိုင်းတာရန် မာလ်တီမီတာပေါ်ရှိ DC ဂီယာကိုအသုံးပြုပါ။5V power supply မဖွင့်ပါက touch panel ကို အစားထိုးပါ။5V မရှိပါက power supply ကို အစားထိုးပါ။
3. ပလပ်အင်ပါဝါထောက်ပံ့မှုကို အစားထိုးသော်လည်း ၎င်းကို မဖွင့်နိုင်သေးပါက၊ စမတ်ထိန်းချုပ်ကိရိယာ ပင်မဘုတ်ကို အစားထိုးပါ။
မေး- နောက်ခံတွင် ဒေါင်လိုက်လိုင်းများ သို့မဟုတ် အစင်းကြောင်းများ ရှိပါသည်။
အဖြေ- 1. မီနူးရှိ အလိုအလျောက် တည့်မတ်မှုကို ရွေးပါ။
2. မီနူးရှိ နာရီနှင့် အဆင့်ကို ချိန်ညှိပါ။
မေးခွန်း- ထိတွေ့နေရာချထားမှု မမှန်ကန်ပါ။
အဖြေ- 1. ချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးရန် နေရာချထားရေးပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါ။
2. လိုအပ်ပါက WIN စနစ် ကိုယ်တိုင် ချိန်ညှိခြင်း ပရိုဂရမ်အား ချိန်ညှိရန်အတွက် အသုံးပြုထားခြင်း ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးပါ။ရှာဖွေရန် အထူးပရိုဂရမ်ကို အသုံးပြုပါ။3. ထိတွေ့ဘောပင်သည် မျက်နှာပြင်ကို မျက်နှာမူခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
မေး- ထိတွေ့လုပ်ဆောင်မှု အလုပ်မလုပ်ပါ။
အဖြေ- 1. touch driver ကို host computer တွင် ထည့်သွင်းပြီး အသက်သွင်းထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။2. ထိမိသော အရာဝတ္ထု၏ အရွယ်အစားသည် လက်ချောင်းနှင့် ညီမျှခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။3. ထိတွေ့မျက်နှာပြင်ကို USB ကြိုး မှန်ကန်စွာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။4. ထိတွေ့မျက်နှာပြင် ကေဘယ်ကြိုးသည် ရှည်လွန်းသလား စစ်ဆေးပါ။အချက်ပြ ထုတ်လွှင့်မှု လျော့ချခြင်း။
မေး- ကွန်ပြူတာ မဖွင့်ထားဘူး။
အဖြေ- ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုကို ပုံမှန်အတိုင်းဖွင့်ထားပြီး၊ ပါဝါကြိုး ပြုတ်ကျခြင်းရှိမရှိ၊ ကွန်ပျူတာပါဝါကြိုးကို ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီးနောက် ကွန်ပျူတာပါဝါကြိုးကို ထပ်မံတပ်ပါ။
မေး- ကွန်ပျူတာက ထပ်ခါထပ်ခါ ပြန်စပါတယ်။
အဖြေ- မမ်မိုရီမော်ဂျူးကို ပြန်လည်တပ်ဆင်ပါ၊ မားသားဘုတ်အား ထုတ်ပစ်ပါ၊ ခလုတ်ဘက်ထရီကို ဖယ်ရှားပါ၊ မားသားဘုတ်ပေါ်ရှိ အပြုသဘောနှင့် အနုတ်လက္ခဏာများကို သတ္တုဖြင့် 3-5 စက္ကန့်ကြာ ကာရံကာ၊ ၎င်းကို ပြန်လည်ချိတ်ဆက်ကာ ထည့်သွင်းပြီး စတင်ပါ။အထက်ဖော်ပြပါနည်းလမ်းပြီးနောက်၊ ထပ်ခါတလဲလဲ ပြန်လည်စတင်ရန် လိုအပ်ပါသည်။ကွန်ပြူတာမားသားဘုတ်နှင့် ကွန်ပြူတာ ပါဝါထောက်ပံ့မှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကို သုံးသပ်ပါ။
မေးခွန်း- ကွန်ပြူတာမုဒ်တွင် အချက်ပြအချက်ပြမှုသည် အကွာအဝေးပြင်ပတွင် ရှိနေသည်။
အဖြေ- 1. Display ကို မှန်ကန်စွာ သတ်မှတ်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။2. Resolution သည် အကောင်းဆုံး ကြည်လင်ပြတ်သားမှု ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးပါ။3. မီနူးရှိ လိုင်းထပ်တူပြုခြင်းနှင့် အကွက်ထပ်တူပြုခြင်းကို ချိန်ညှိပါ။
မေးခွန်း- ကွန်ပြူတာကို စတင်၍မရပါ၊ ကွန်ပျူတာပါဝါ မီးပိတ်နေသည် သို့မဟုတ် မူမမှန်ပါ။
အဖြေ- စမ်းသပ်ရန် OPS ကွန်ပျူတာကို တိုက်ရိုက် အစားထိုးပါ။စတင်ရန် ပျက်ကွက်ပါက ပလပ်အင်ပါဝါထောက်ပံ့မှုနှင့် ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု နောက်ကြောင်းပြန်ယာဉ်ကို အစားထိုးပါ။
မေးခွန်း- ကွန်ပြူတာစနစ်သည် ပုံမှန်အတိုင်း ပြသခြင်း သို့မဟုတ် မစတင်နိုင်ပါ။
အဖြေ- 1. ဒက်စတော့သို့ဖွင့်သောအခါ၊ ၎င်းသည် "system activation" ကိုနှိုးဆော်ပြီး အနက်ရောင်စခရင်ဖြင့် desktop သို့ဝင်ရောက်သည်။ဤကိစ္စတွင်၊ လည်ပတ်မှုစနစ်၏ကြိုတင်ထည့်သွင်းထားသောဗားရှင်းသည် သက်တမ်းကုန်သွားကာ သုံးစွဲသူသည် ၎င်းကိုယ်တိုင် စနစ်ကို စတင်အသုံးပြုသည်။2. ပြုပြင်မုဒ်သို့ စတင်ပြီးနောက်၊ ၎င်းသည် ပေါ်လာပြီး ပြုပြင်မရနိုင်ပါ။ပြန်ဖွင့်ပြီး ကီးဘုတ်ကို နှိပ်ပါ၊↑↓", "normal startup" ကိုရွေးချယ်ပါ၊ ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သည်၊ အသုံးပြုသူသည် မှန်ကန်စွာပိတ်သွားရပါမည်။ ဤပြဿနာကို ရှောင်ရှားနိုင်ပါသည်။ 3. ကွန်ပျူတာကိုဖွင့်ပြီး win7 အိုင်ကွန်သို့ဝင်ရောက်သောအခါ၊ ၎င်းသည် အကြိမ်ကြိမ်ပြန်လည်စတင်သည် သို့မဟုတ် အပြာရောင်စခရင်ကိုစတင်သည်။ ပါဝါဖွင့်ပါ။ BIOS သို့ဝင်ရောက်ရန် "Del" ခလုတ်ကိုနှိပ်ပါ၊ ဟာ့ဒ်ဒစ်မုဒ်ကိုပြောင်းပါ၊ "IDE" မှ "ACHI" မုဒ်သို့ပြောင်းပါ သို့မဟုတ် "ACHI" မှ "IDE" သို့ပြောင်းပါ 4. စနစ်သည် ယခုထိမလုပ်ဆောင်နိုင်သေးပါ။
မေးခွန်း- စက်သည် အင်တာနက်သို့ ချိတ်ဆက်၍မရပါ၊ ကွန်ရက်အပေါက်သည် "X" ကိုပြသမည် သို့မဟုတ် ဝဘ်စာမျက်နှာကို ဖွင့်၍မရပါ။
အဖြေ- (1) ပြင်ပကွန်ရက်ကို ချိတ်ဆက်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုရန်နှင့် စမ်းသပ်ရန် လက်ပ်တော့ကို အသုံးပြုခြင်းကဲ့သို့သော အင်တာနက်ကို အသုံးပြုခြင်း ရှိ၊မရှိ (2) ကွန်ရက်ကတ်ဒရိုက်ဗာကို စက်ပစ္စည်းမန်နေဂျာတွင် ထည့်သွင်းထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ (3) ကွန်ရက်ဆက်တင်များကို စစ်ဆေးပါ။ (၄) ဘရောက်ဆာ မှန်ကန်ခြင်း ရှိ၊ မရှိ အတည်ပြုပါ၊ ဗိုင်းရပ်စ် မရှိပါ၊ ၎င်းကို ဆော့ဖ်ဝဲလ် ကိရိယာများဖြင့် ပြုပြင်နိုင်သည်၊ ဗိုင်းရပ်စ်ကို စစ်ဆေးပြီး သတ်နိုင်သည် (၅) ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် စနစ်ကို ပြန်ယူပါ၊ ဤပြဿနာကို ဖြေရှင်းရန် ဒရိုက်ဗာကို ပြန်လည်ထည့်သွင်းပါ (၆) ) OPS ကွန်ပျူတာ မားသားဘုတ်ကို အစားထိုးပါ။
မေးခွန်း- စက်သည် နှေးကွေးစွာ လည်ပတ်နေပြီး ကွန်ပြူတာ ပိတ်နေပြီး whiteboard software ကို ထည့်သွင်း၍မရပါ။
အဖြေ- စက်ထဲတွင် ဗိုင်းရပ်စ်ရှိနေသည်၊ သင်သည် ဗိုင်းရပ်စ်ကိုသတ်ရန် သို့မဟုတ် စနစ်ကို ပြန်လည်ထူထောင်ရန် လိုအပ်ပြီး စနစ်ပြန်လည်ထူထောင်ခြင်းဆိုင်ရာ အကာအကွယ်ကို ကောင်းမွန်စွာလုပ်ဆောင်ပါ။
မေး- စက်ပစ္စည်းကို ဖွင့်၍မရပါ။
အဖြေ- 1. လျှပ်စစ်မီးရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။2. စက်ပစ္စည်းခလုတ်ကို ဖွင့်ထားခြင်းရှိ၊ မရှိနှင့် ပါဝါခလုတ်အချက်ပြမှုသည် အနီရောင်ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။3. စနစ်ညွှန်ပြချက်သည် အနီရောင် သို့မဟုတ် အစိမ်းရောင်ရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး စွမ်းအင်ချွေတာသည့်မုဒ်ကို ဖွင့်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
မေးခွန်း- ဗီဒီယိုလုပ်ဆောင်ချက်တွင် ရုပ်ပုံနှင့် အသံမရှိပေ။
အဖြေ- 1. စက်ကိုဖွင့်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။2. အချက်ပြလိုင်းအား ပလပ်ထိုးထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပြီး အချက်ပြအရင်းအမြစ်နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။3. အတွင်းကွန်ပြူတာမုဒ်တွင်ရှိနေပါက၊ အတွင်းကွန်ပြူတာဖွင့်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
မေးခွန်း- ဗီဒီယိုလုပ်ဆောင်ချက်တွင် အရောင်မရှိပါ၊ အားနည်းသောအရောင် သို့မဟုတ် အားနည်းသောပုံမရှိပါ။
အဖြေ- 1. မီနူးရှိ chroma၊ တောက်ပမှု သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်များကို ချိန်ညှိပါ။2. အချက်ပြလိုင်းကို မှန်ကန်စွာချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
မေးခွန်း- ဗီဒီယိုလုပ်ဆောင်ချက်တွင် အလျားလိုက် သို့မဟုတ် ဒေါင်လိုက် အစင်းကြောင်းများ သို့မဟုတ် ရုပ်ပုံတုန်လှုပ်ခြင်း ရှိသည်။
အဖြေ- 1. အချက်ပြလိုင်းအား ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်ထားခြင်း ရှိ၊မရှိ စစ်ဆေးပါ။2. အခြားအီလက်ထရွန်နစ်ပစ္စည်းများ သို့မဟုတ် လျှပ်စစ်ကိရိယာများကို စက်အတွင်းတွင်ထားရှိခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
မေးခွန်း- ပရိုဂျက်တာတွင် အချက်ပြပြသမှု မရှိပါ။
အဖြေ- 1. VGA ကေဘယ်ကြိုး၏ အစွန်းနှစ်ဘက် ချောင်သွားခြင်း ရှိ၊ မရှိ၊ ပရိုဂျက်တာ၏ ဝိုင်ယာကြိုးများ မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပြီး input terminal ကို ချိတ်ဆက်ရပါမည်။signal channel သည် wiring channel နှင့် ကိုက်ညီမှုရှိမရှိ၊ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု panel သည် "PC" ချန်နယ်ကိုရွေးချယ်သည်။2. အချက်ပြအထွက်ရှိမရှိကြည့်ရန် OPS ကွန်ပျူတာ၏ VGA အပေါက်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ရန် ကောင်းမွန်သော မော်နီတာကို အသုံးပြုပါ။အချက်ပြမှုမရှိပါက OPS ကွန်ပျူတာကို အစားထိုးပါ။အချက်ပြမှုတစ်ခုရှိပါက စနစ်အား ညာဖက်ကလစ်နှိပ်ပြီး "Properties" ကိုရိုက်ထည့်ကာ မော်နီတာနှစ်ခုကို တွေ့ရှိခြင်းရှိမရှိ ကြည့်ရှုရန် ပြသပါ။မော်နီတာနှစ်ခုအတွက်၊ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု မားသားဘုတ် သို့မဟုတ် ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုနောက်ကြောင်းကို အစားထိုးပါ။မော်နီတာတစ်ခုသာရှိလျှင် OPS ကွန်ပျူတာကို အစားထိုးပါ။
မေးခွန်း- ပရိုဂျက်တာ ပြသသည့် အချက်ပြမှု မူမမှန်ပါ။
အဖြေ- 1. မျက်နှာပြင်ကို လုံး၀မပြသနိုင်ခြင်း၊ ဒက်စတော့အိုင်ကွန်များကို သင့်လျော်သော ရုပ်ထွက်နှင့် အပြည့်အဝ မချိန်ညှိနိုင်ခြင်း သို့မဟုတ် စနစ်အား ပြန်လည်ရယူခြင်း (ကွန်ပြူတာစတင်သည့်အခါ၊ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးစနစ်ကို ရွေးချယ်ရန် "K" ခလုတ်ကို နှိပ်ပါ) 2။ မျက်နှာပြင်သည် အရောင်ထွက်နေသည် သို့မဟုတ် မျက်နှာပြင်သည် မှောင်နေပါသည်။VGA ကေဘယ်လ် သည် နဂိုအတိုင်းဖြစ်ပြီး ကောင်းမွန်စွာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပြီး ပရိုဂျက်တာ လုပ်ဆောင်ချက်သည် ပုံမှန်ဖြစ်သည်။VGA ကြိုးနှင့် ပရိုဂျက်တာ ပုံမှန်ဖြစ်ပါက OPS ကွန်ပျူတာ၏ VGA မျက်နှာပြင်သို့ တိုက်ရိုက်ချိတ်ဆက်ပါ။မျက်နှာပြင်သည် ပုံမှန်ဖြစ်ပါက ဗဟိုထိန်းချုပ်မှု နောက်ကြောင်းပြန်ပျံနှင့် မားသားဘုတ်ကို အစားထိုးပါ။ပုံမှန်မဟုတ်ပါက OPS ကွန်ပျူတာကို အစားထိုးပါ။
မေး- ပုံမှာ အရောင်မရှိလို့ အရောင်မှားနေလား။
အဖြေ- 1. VGA နှင့် HDMI ကြိုးများ ကောင်းစွာချိတ်ဆက်ထားခြင်း မရှိ၊ သို့မဟုတ် အရည်အသွေး ပြဿနာများ ရှိ၊ မရှိ စစ်ဆေးပါ။2. မီနူးရှိ ခရိုမာ၊ တောက်ပမှု သို့မဟုတ် ဆန့်ကျင်ဘက်အား ချိန်ညှိပါ။
မေး- ပံ့ပိုးမထားသော ဖော်မတ်ကို ပြသပါ။
အဖြေ- 1. မီနူးရှိ အလိုအလျောက် တည့်မတ်မှုကို ရွေးပါ။2. မီနူးရှိ နာရီနှင့် အဆင့်ကို ချိန်ညှိပါ။
မေးခွန်း- အဝေးထိန်းခလုတ် မအောင်မြင်ပါ။
အဖြေ- 1. အဝေးထိန်းခလုတ်နှင့် တီဗွီရီမုတ်ထိန်းချုပ်မှု လက်ခံရရှိသည့်အဆုံးကြားတွင် အတားအဆီးရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။2. အဝေးထိန်းခလုတ်ရှိဘက်ထရီ၏ဝင်ပေါက်များ မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။3. အဝေးထိန်းခလုတ်သည် ဘက်ထရီကို အစားထိုးရန် လိုအပ်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
မေးခွန်း- ခလုတ်တစ်ချက်ခလုတ်သည် ပရိုဂျက်တာအား ထိန်းချုပ်၍မရပါ။
အဖြေ- (1) ဝယ်ယူသူသည် ပရိုဂျက်တာ၏ RS232 ထိန်းချုပ်မှုကုဒ် သို့မဟုတ် အနီအောက်ရောင်ခြည်ကုဒ်ကို မရေးထားဘဲ ပရိုဂျက်တာ၏ အနီအောက်ရောင်ခြည် စူးစမ်းလေ့လာနိုင်သည့် ဧရိယာတွင် အနီအောက်ရောင်ခြည်ကို ထည့်သွင်းထားသည်။ကုဒ်ကိုရေးပြီး ထိန်းချုပ်လိုင်းအား ကောင်းမွန်စွာချိတ်ဆက်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။(၂) အခြေခံဘောင်များကို သတ်မှတ်ပြီးနောက်၊ ခလုတ်၏ ဗဟိုထိန်းချုပ်မှုလုပ်ဆောင်ချက်အားလုံးကို ရွေးချယ်ရမည်၊√"၊ အခြေခံဘောင်များကို ရေးပါ။ (၃) ကုဒ်ပေးပို့ချိန်၊ နှောင့်နှေးချိန်နှင့် လျှပ်စစ်လော့ခ်၏ ပါဝါပိတ်ချိန်တို့ကို သတ်မှတ်ပါ။
မေးခွန်း- အသံလုပ်ဆောင်ချက်စပီကာတွင် အသံတစ်ခုတည်းသာရှိသည်။
အဖြေ- 1. မီနူးရှိ အသံချိန်ခွင်လျှာကို ချိန်ညှိပါ။2. ကွန်ပြူတာ အသံထိန်းချုပ်မှုဘောင်တွင် ချန်နယ်တစ်ခုသာ သတ်မှတ်ထားခြင်းရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။3. အသံကြိုးကို မှန်ကန်စွာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။
မေးခွန်း- အသံလုပ်ဆောင်ချက်တွင် ရုပ်ပုံများပါသော်လည်း အသံမရှိပါ။
အဖြေ- A- 1. အသံတိတ်ခလုတ်ကို နှိပ်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။2. အသံအတိုးအကျယ်ကို ချိန်ညှိရန် အသံအတိုးအကျယ် +/- ကို နှိပ်ပါ။3. အသံကြိုးကို မှန်ကန်စွာ ချိတ်ဆက်ထားခြင်း ရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။4. အသံဖော်မတ်မှန်ကန်မှုရှိမရှိ စစ်ဆေးပါ။